Uyenza njani i-GIF yoPhilayo yeTumblr
NguJanine Warner, uDavid LaFontaine
Enye indlela yokongeza i-spice encinci kukusebenzisa i-animated GIF kwi Tumblr blog. Okwangoku, umgaqo-nkqubo weTumblr kukuba umda wobungakanani be-GIF ye-animated yi-1MB kwaye imifanekiso kufuneka ibencinci kune-500 x 750 px, okanye ziya kuthotywa ngokuzenzekelayo.
Xa ukhetha iklip yevidiyo oza kuyiguqula ibe yi-GIF yoopopayi, khetha ikliphu enesindululo kwaye yeyiphi intatheli yefoto uHenri Cartier-Bresson owayenguvulindlela njengeXesha lokuGqiba. Cinga ngalo mzuzu xa i-sprinter iwela umgca wokugqibela, iweta iye yawisa itreyi egcwele iiglasi ze-champagne, okanye usana lujika iintloko luncume.
Iluphu lomntu ohlala naye egumbini lokujonga ngaphandle ngefestile ngokwemoya inokubonakala ngathi ihambisa ubukho be-angst, kodwa unokwenza into efanayo ngefoto emileyo, kutheni uzikhathaza ngoopopayi?
Ukuba unayo i-Photoshop, lukhetho olukhulu lokudala ii-GIF zoopopayi. Ukuba awunayo i-Photoshop, okanye ukuba ufuna ukuba nenkqubo ehlengahlengisa kwaye yenze lula inkqubo yokwenza i-animated GIF, ukhetho oluninzi lusemarikeni.
Ezinye zisimahla, kodwa ezona zisombululo zidumileyo neziluncedo zihlala zibiza i-R10 okanye njalo. Ukuba ujonge ukukhupha ii-GIF zoopopayi ngokukhawuleza kwaye rhoqo, kunokuba kulunge ukuvavanya ezinye zeemveliso ezizodwa.
Kukho uvavanyo oluninzi kunye nephutha elibandakanyekayo xa usebenzisa inkqubo ene-high-power efana ne-Photoshop ukwenza i-animated GIF. I-Photoshop ikuvumela ukuba ubenolawulo kuyo yonke ipikseli kuwo wonke umfanekiso ophilayo. I-tradeoff yile yokuba kufuneka wenze ngesandla ngokwakho ukhetho oluninzi ngokwakho. Ezi nkqubo zilandelayo zinokuzenzekelayo ezo zinto zikhethiweyo okanye zenze uhlengahlengiso ngakumbi.
Indawo yokufota ye-GIF (IMac)
Ifumaneka kwiVenkile ye-Mac, le nkqubo ikwenza ukuba ufezekise ngokukhawuleza iziphumo ezinje, njengokutshintsha ukunqumlela ukusondeza, ukuseta inani leziporo, kunye nokulungiswa kombala.
GifBoom (iOS kunye ne-Android)
Olu setyenziso lwezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS likuvumela ukuba wenze ii-GIF ezilula zoopopayi ngelixa ungekho kwikhompyuter yakho. Unokongeza imvelaphi yelizwi kunye nomculo kwaye uthumele indalo yakho njengomyalezo wabucala. IGifBoom ikwanayo negalari eyaziwayo ekwi-intanethi apho abasebenzisi banokwabelana khona kwaye bavote kwindalo yomnye nomnye.
Akukho ndlela lolu luhlu lubandakanya konke. Ukukhangela okuqhelekileyo kuGoogle kuvela ubuncinci iinkqubo ezingama-24 ezithembisa ukwenza ii-GIF zoopopayi kube lula, kwaye unokufumana uninzi ngakumbi. Ngenxa yokuxhaphaka kokuthandwa kwe-GIF ye-animated, abaphuhlisi kunye neekhowudi kunokwenzeka ukuba baqalise iinkqubo zesoftware veki nganye.
Imgflip (usetyenziso lwe-Intanethi, iqonga elingakholekiyo)
Le app intle online ikuvumela ukuba uthathe iividiyo zakho, kunye neevidiyo ezivela kuYouTube, Vimeo, okanye ezinye iisayithi zokubamba ividiyo kwi-Intanethi, kwaye uziguqulele kwi-GIF yoopopayi. I-Imgflip isimahla ukuzama, kodwa ukuba ufuna ukusebenzisa iifayile zevidiyo ezinkulu (ezinkulu kune-35MB), kuya kufuneka uphucule uguqulelo lwePro nge $ 9.95 ngenyanga.
I-z-pack ngexesha lokukhulelwa
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo ezininzi, i-GifCam isebenza ngokukuvumela ukuba uzobe ibhokisi ejikeleze ividiyo ofuna ukuyiguqula ibe yi-animated GIF kwiscreen sakho, emva koko urekhode amazwibela evidiyo kwaye uguqula- Ukuhambahamba, kwezobugcisa thetha-it. Unokwenza nemizobo elula usebenzisa ezinye izixhobo kwiGifCam.
Kusimahla ukusebenzisa, kodwa abaphuhlisi bacela ukuba unikele ngeedola ezimbalwa ukuba uyathanda ukuyisebenzisa.
I-diclofenac er 100 mg
indlela yokukhangela ngokugqwesileyo
indlela yokongeza iingcambu zesikwere
iyeza lesono ngelixa uncancisa
indlela yokwenza umshicileli ungagqibekanga
iziphumo ebezingalindelekanga zeepilisi ze potassium